amazon & apos; s yekutanga hombe moto piritsi kutengeswa kwe2021 iri pano
Kuru Nhau & Ongororo Amazon & apos; s yekutanga hombe Fire piritsi kutengeswa kwe2021 iri pano
Amazon & apos; s yekutanga hombe Fire piritsi kutengeswa kwe2021 iri pano
Kazhinji (uye zvakanyanya) yakaderedzwa mumavhiki kutungamira kune gore rapfuura & apos; s Dema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro 'mazororo' , Amazon & apos; s mahwendefa akakurumbira eApple aivapo anoshamisa pamitengo yavo yenguva nezuva neKisimusi.
Tichiri kure nezvatinodana zvinorambidza, akadaro maMSRPs ari pasi zvakare kuChishanu Chishanu 2020-inokwikwidza mazinga e-commerce hofori & apos; s yakazara (isiri-yemwana-centric) slate lineup. Kutanga kubva pamusoro pe ... yepakati-renji chikafu cheni, iyo 2019-yakaburitswa Fire HD 10 parizvino iri kutengeswa pamakumi mashanu neshanu pasi peyakajairwa mune ese ari maviri uye makumi matanhatu neshanu GB kusiyanisa akasiyana, ayo anokwana kuita 37 ne29 muzana akagerwa murume mukuru & apos; s $ 149.99 uye $ 189.99 rondedzero yemitengo zvichiteerana.
Iwo maviri mamodheru anogovera ine simba octa-core processor uye, hazvo, yakasarudzika isingamisike 2GB RAM kuverenga ichitamba yakapinza 10.1-inch kuratidza ine resolution ye 1920 x 1200 pixels. Iwe zvakare simuka kusvika kumaawa gumi nemaviri ehupenyu hwebhatiri, nekukurumidza kutsigira rutsigiro, maviri masipika, 2MP yakatarisana neseri kamera, uye 2MP selfie shooter pane yechipfumbamwe-gen Fire HD 10, pamwe neyaka-gore-warandi iyo Amazon ichiri zvisinganzwisisike zvinodzikira pamazuva makumi mapfumbamwe chete ekufukidzwa kweMoto 7, Moto HD 8, uye HD 8 Uyezve.
Iyo Moto HD 8 Uyezve, funga iwe, inorongedza yakawedzera gig yeyeuchidzo ichienzaniswa neese ari maviri Moto HD 8 uye HD 10 uchiri kugadzirisa quad-core CPU uye yakajairwa HD (pane yakazara HD) skrini ine resolution ye1280 x 800 pixels uye diagonal ye8 inches.
Kunyangwe iwe & maapos; uchifarira 32 kana 64GB yekumisikidza yekugadzirisa yeiyi yatove inokwanisika Plus-yakashongedzwa piritsi, unogona kusevha makumi matatu emari kekutanga mune ingangoita mwedzi miviri Izvo zvakafanana zvinoenda kune yakachipa isingadhuri Amazon Fire HD 8, iyo inorasikirwa gig ye RAM, pamwe neiyo isina waya yekuchaja kugona kweMoto HD 8 Plus.
Chekupedzisira, iyo yakaderera-yakachipa-mutengo uye yekupedzisira-yakadzika-magumo Moto 7 inowanikwa ne $ 10 isingasviki pane yakajairwa panguva yekunyora uku nesarudzo yako yegumi neshanu kana makumi matatu nemaviri emadhiguru enzvimbo yekudyara yedhijitari, inotyisa kwazvo quad-core processor yakavharwa pa1.3GHz chete, kusvika maawa manomwe ehupenyu hwebhatiri, ingori 1 gig ye RAM, uye 7-inch skrini ine resolution ye1024 x 600 pixels.
Rondedzero yekudonha haigone ipapo, zvakare inosanganisira diki-USB chiteshi uye mono mutauri, asi zvekare, hapana rimwe zita hombe rinogona kutarisira kuzosvika padhuze nekugona kwakanyanya kweuyu mukomana mudiki weAmazon.
sei kupatsanura skrini Android 9
Android pfeka 2.0 zenwatch 3
Apple inozivisa iPhone X bhatani repamba kuwedzera-neTouch ID uye headphone jack
Iyo yakanakisa Galaxy S21 Ultra, S21 Plus, uye S21 majaja ekutenga
Nintendo DS emulator DraStic ikozvino paApple, yakatengwa zvakanyanya
AT & T ine akanakisa emahara eGirazi S20 preorder madhiri, tora S20 Ultra ye $ 400
Maitiro ekuti uwane iyo iPhone app kudzoreredza kubva kuApple
Apple Tarisa SE unboxing
Samsung & apos; s Galaxy Tab S7 uye Tab S7 + mamakisi akanyanya kuderedzwa mukutengesa kukuru kweBlack Chishanu
Iwe unogona ikozvino kutamba nharembozha neiyo Steam Controller kuburikidza neBluetooth
Heano maapplication ayo anouya pre-akaiswa paiyo Galaxy S6, izvi zvinoita kunge super light TouchWiz?
Yakanzurwa LG Tarisa Urbane 2nd Edition LTE inodzokera kuAT & T & apos; s inopfeka roster